Axnew ကနေနှစ်လယ်ပိုင်း Autum ရက်ပေါင်းနှုတ်ခွန်းဆက်စကားနှင့်အသိပေးစာ
အားလုံးချစ်ခင်ရပါသော, ကြင်နာစွာ, 18 မှ 15 ရက်တွင်အလယ်အလတ်ဆောင်းဦးရာသီပွဲတော် (ကြာသပတေးနေ့) အတွက်တရုတ်အတွက် Axnew Display ကို (တနင်္ဂနွေ) စက်တင်ဘာ, 2016 အကြောင်းကြားရမည်ပေးပါ။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထမ်း, ဖောက်သည်များ, ပေးသွင်းသူများနှင့်အခြားသက်ဆိုင်ရာပါတီများအားဤသတင်းစကားကိုဆကျသှယျကူညီပေးပါ။ အိုင်တီ, စစ်ဆင်ရေး, ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခြား depar ...
Axnew 32 လက်မမှ7လက်မကနေ projected capacitive touch နဲ့မော်နီတာထောက်ပံ့
Axnew စသည်တို့ 21.5 လက်မ, 32 လက်မ, tp တက်,7လက်မကနေ projected capacitive touch နဲ့မော်နီတာ, 8 လက်မ, 8.4 လက်မ, 10 လက်မ, 10.4 လက်မ၏ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားပေးပါသည်။ ကိုယ့်ကို USB interface ကိုအတူ plug နှင့်လွတ်လပ်စွာကြောင့်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဖောက်သည်များ '' တောင်းဆိုမှုများအရကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာအသင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအထူတီထွင်ထားပါတယ် ...
စက်မှု touch panel ကို PC များ
တက်ဘလက် pc ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူများစွာသောစက်မှုဆိုင်ရာနယ်ပယ်စျေးနှုန်းချိုသာ panel ကို PC များသုံးစွဲဖို့စတင်ပါပြီနှင့်စက်မှု touch panel ကို PC များဈေးကွက်လည်းကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုခံထားပါတယ်, လူအ Touch-screen ကိုတက်ဘလက်လူ့သဘောသဘာဝကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့စတင် ကွန်ပျူတာ။ ထို့ကြောင့် ...
အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်၏နာမည်ကျော်နှင့်တကွ, Project capacitive မျက်နှာပြင်လူကြိုက်အများဆုံးထိတွေ့ဖန်သားပြင်ဖြစ်လာသည်နှင့်တဖြည်းဖြည်းဖောက်သည်တစ်ဦး၏ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုအဖြစ်တော်လှန်ရေးမျက်နှာပြင်အစားထိုးလိုက်ပါ။ capacitive မျက်နှာပြင်၏အားသာချက်များ: 1. ဒါဟာအလွယ်တကူ2ကုပ်ခြစ်ခြင်းနှင့်ဝတ်ထားချွန်ထက်တ္ထုအားဖြင့်မထိခိုက်နေသည် ....
တစ်နှစ် 2009 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Axnew အောင်မြင်စွာကမ္ဘာတဝှမ်းကဒီစက်မှုဇုန် display ကိုအညီ clients များနှင့်အတူရေရှည်ဆက်ဆံရေးမျိုးတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ယုံကြည်ဖို့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးက်ဘ်ဆိုက် axnew.com ကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်ဖောက်သည်များကသိကြရသည်။ https: အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုတိယက်ဘ်ဆိုက်စတင်သည် // စက်မှုဇုန်-lcdmonitor ...
ချစ်ခင်ရပါသောအချင်းလူသို့မဟုတ် Madam, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံစက်မှုပန်းခြံအတွင်းရှိသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းမှရွှေ့သွားကြောင်းအကြောင်းကြားရမည် ကျေးဇူးပြု. နှင့်ဇန်နဝါရီ 1 ပြီးနောက်, 2015 ခုနှစ်နယူးလိပ်စာအဖြစ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ပါသည်: 4th Floor, Yinliantong စက်မှုပန်းခြံ, NO.460 AilianZhangbei, Longgang ခရိုင် , ShenzhenChina ။ ဖုန်းနံပါတ်, ဖက်စ်နံပါတ်နှင့် E-mai ...
မှာ IR Touch ကိုအလုပ်လုပ်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး
အနီအောက်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်သင့်ရဲ့ကြီးမားတဲ့အရွယ်အစား Display ကိုမျက်နှာပြင်အဖို့ကို dual နှင့် Multi-touch features တွေကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုပထမမှာ IR ထိတွေ့နိယာမအကြောင်းပိုမိုသိပါစေ။ အနီအောက်ရောင်ခြည်ထိမျက်နှာပြင်သာမန်အားဖြင့် Display ရဲ့မျက်နှာပြင်၏မျက်နှာစာတွင်တပ်ဆင်သောတစ်ဦးထိတွေ့ဘောင်ဖြစ်ပါတယ်။ frame ကိုပုံနှိပ် circui နှင့်အတူပေါင်းစည်းဖြစ်ပါတယ် ...
AXNEW display ကိုစက်မှုမော်နီတာ
AXNEW display ကိုသင်နှင့်အတူစက်မှုမော်နီတာအကြောင်းကိုတစ်ခုခု shared ။ တဦးတည်းစက်မှုမော်နီတာရွေးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? စက်မှု LCD မော်နီတာလည်းလက်တော့ပ်များအတွက် LCD မော်နီတာကဲ့သို့တူညီသောရည်ရွယ်ချက်ဖြတ်တောက်။ သို့သော်စစ်မှန်သောစက်မှုဇုန်မော်နီတာ: start နှင့်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းအလုပ်လုပ် enviroments မှာ run တာအတွက်လုပ်ကိုင်မည် ...
8.0 "ပွင့်လင်း frame ကိုမော်နီတာထိ options များနှင့်အတူ 800 × 600
AXNEW 8.0''800 × 600 high-မြင်သာကြမ်းတမ်း display ကို (4း3) ကိုအားပေးအားမြှောက်ပုံစံနှင့်သင်ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပြကြကုန်အံ့။ 8.0 '' ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာများအနေဖြင့်မူထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်အတူနောက်ခံအလင်း LED နှင့်သင်နှင့်အတူအချို့သောသတင်းအချက်အလက်မျှဝေပါ။ ဤသည်လူကြိုက်များထုတ်ကုန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ VGA interface ကို၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုထည့်သွင်း ...
နေရောင်ခြည်ဖတ်လို့ရအောင်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်7လက်မ၏မော်နီတာနှင့်ပွင့်လင်း frame ကိုဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူ 8 လက်မ
18-11-22 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
ပွင့်လင်း frame ကိုဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူ7လက်မနဲ့ 8 လက်မ၏နေရောင်ခြည်ဖတ်လို့ရအောင်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်မော်နီတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်း 5V နဲ့ 12V အပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသော voltages ကို, ကိုက်ညီဖို့သတ်မှတ်ချက်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုတီထွင်ခဲ့ပြီးထွက်လာကြပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဖြေရှင်းချက်ထိုသို့သောယာဉ်ရပ်နားမှုစနစ်, အရောင်းအဖြစ်တစ်ပိုင်းပြင်ပတွင် applications များ, အဘို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ...
touch panel ကို pc များအတွက် flat ture ဒီဇိုင်း
Axnew 1080 ×ကို full HD 1920 နှင့်အတူ, 21 လက်မ capacitive touch panel ကို pc များအတွက်ပြားချပ်ချပ်စစ်မှန်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုအားပေးအားမြှောက်။ 13 လက်မနှင့်အပြည့်အဝ hd ကိုက IPS သတ်မှတ်ချက်များလာမည့်လအနည်းငယ်အတွင်းထွက်လာမယ့်နေကြသည်နှင့်အတူ 15.6 လက်မအချို့နဲ့အခြားအရွယ်အစား။ သငျသညျမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
ကြမ်းတမ်းအလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်၌အကြှနျုပျတို့၏မော်နီတာကိုထောကျပံ့ temperatureto ကျယ်ပြန့်နှင့်အတူစက်မှု controller ကိုဘုတ်အဖွဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့၏မော်နီတာအီး-EMC, အီး-LVD, FCC သည်, Rohs လိုက်နာမှုနှင့်အတူဖြစ်ကြသည်။
E-mail ကို: sales@axnew.com
Skype ကို: axnewshirley